Fulgurite: waa maxay, sifooyinka, asalka iyo guryaha | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah shakiga ayaa ah in fulgurite waa macdan ama dhagax. Waxaan ka hadleynaa macdanta 'mineraloid' oo ay sameysay saameynta danab iyo qaab-dhismeedkeeda ayaa caddeyn u ah qaabka ifafaalaha cimilada. Fulgurite si fiican ayaa loo yaqaan oo ka tirsan noocyo kala duwan oo miinooyin ah oo loo yaqaan 'lechatelierite'.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka, asalka iyo sifooyinka fulgurite.
2 Guryaha fulgurite
3 Abuuritaanka fulgurite
4 Keydadka iyo isticmaalka
Waxaan soo sheegnay inay tahay a Miinada macdanta ee loo yaqaan 'biriq'. Xaqiiqda ah in nooc ka mid ah macdanta ay ku samaysan tahay danabku waa mid cajiib ah oo ku filan in lagu sii baaro. Si kastaba ha noqotee, markii aan baarayno, waxaan ogaanay sida cajiibka leh ee loo yaqaan 'mineraloid'. Magaca fulgurite wuxuu ka yimid erayga fulgur oo Latin ahaan macnaheedu yahay hillaac. Waxay ka mid noqon karaan macdanta 'mineraloid' ansax ah oo loo yaqaan magaca lechatelierite. Waxay yihiin qaab dhismeed xamaasadeysan oo leh nuxur aad u sarreeya oo ah silsiladda 'silicon oxide'. Macdanta 'mineraloid' si looga fiirsado kooxdan dhexdeeda, waa inay ku dhowaad si gaar ah u sameysmaan silica.
Waxaa jira nooc kale oo fulgurite ah oo ka kooban waxyaabo kale. Qaar ka mid ah waxaa lagu sameeyay carro dhoobo ah iyo noocyo kale oo dhagax ah oo ka tirsan kooxda metamorphic.
Macdantaan "mineraloid" badanaa waxay ka kooban tahay ciida siliceous. Waxyaabaha kiimikada ahi way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran jawiga juquraafi ahaan meeshii laga sameeyay Waxay sidoo kale kuxirantahay gobolka aduunka uu danabku kudhacay. Qaar badan oo fulgurites ah ayaa kara ka kooban qaddar yar oo aluminium ah Birta, iwm Waa inay ka kooban yihiin inta badan silica oxide. Tusaale ahaan, mid ka mid ah sababaha ay fulgurites-yada qaar u leeyihiin hooska u dhexeeya bunni iyo cagaar waa cawsha deerada oo ku jira birta xabagta.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo kala duwan waxaadna heli kartaa macdantaan loo yaqaan 'mineraloid' oo u dhexeysa caddaan, illaa hurdi ilaa madow. Dhismayaasha ay fulgurite leeyihiin waxay noqon karaan kuwo jajaban. Haddii aan falanqeyno muuqaalka fulgurite, waxaan aragnaa inuu yahay mid qallafsan oo leh qaabab u eg xididdada geedka. Inta badan xididaduhu waa qaab qaab dhululubo ah.
Sidii aan horey u soo sheegnay, asalka miinadan macdanta ahi waxay ka timid danab ku soo dhaca. Marka laga soo baxo dheecaanada korantada ee awooda badan leh, noocan nooca loo yaqaan "mineraloid" ayaa la samayn karaa. Sidaas fulguritas ah Waxay qaadataa ugu yaraan 1600-2000 darajo oo heer kulka ah si loo sameeyo. Saynisyahannadu waxay ku qiyaaseen in awoodda hillaac ee hillaacu ay ku kala duwan tahay inta u dhexeysa 1-30 megajoules halkii mitir.
Xilliga ay biriqdu socoto waxaan ognahay inay ku dul wareegayso dhulka oo dhan. Waa xilligaas markay dhalaasho oo ay keento isku-darka maaddada ciidda. Waxaa jira halabuur hodan ku ah ciida ama dhoobada oo dhalaali kara danab. Sidan oo kale, dhismayaal jajaban oo qaab tuubooyin ah ayaa loo soo saaray taas Waxay qiyaasi karaan laba sentimitir ilaa 15 mitir oo dherer ah.
Muunado badan cadayn furitaan cidhiidhi ah oo galaas la shubay ah ayaa looga tagi karaa gidaarada gudaha. Bannaanka, waxaan kaliya daawan karnaa dusha sare ee ka sameysan granules ciid iyo dhagaxaan yaryar. Qaabka layaabka leh ee gudaha wuxuu dhacaa markaan falanqeyno fulgurite iyada oo loo marayo mikroskoobka elektaroonigga ah.
Marka loo eego halabuurka iyo qaabdhismeedka, fulgurite waxaa loo kala saari karaa dhowr nooc:
Ciid fulgurite: Waa midda la soo saaro marka danabku ku soo dhaco carrada oo leh carro ciid ah.
Clay Fulgurite: badanaa waxay samaysantaa marka danabku ku dhaco carrada fara badan oo dhoobo ah waxayna soo saartaa nooc kale oo ah qaab-dhismeedka miinooyinkan.
Faashadda Kaalshiyamka: Waa noocyo kale oo leh qaddar badan oo kaalshiyam ah oo ku jira qaab diirimaad la huwiyey.
Rock fulgurite: wuxuu badanaa ku samaysmaa dhagaxyada kale iyo a labada dhisme. Caadi ahaan way xoogaa yar yihiin cabir ahaan waxayna leeyihiin adkaansho sare.
Fulgurites xad dhaaf ah: waxay noqon karaan goobaaban ama qaab-dhicis ah.
Keydadka iyo isticmaalka
Bilowgii maqaalka waxaan soo sheegnay in macdantaan laga heli karo aduunka oo dhan. Waxaan ognahay in maalin kasta kumanaan danab ah ay ku dhacaan dhulka dushiisa. In kasta oo si gaar ah magaalada aan ku nool nahay, aan wax danab ahi u dhicin, haddana waxay badanaa ku dhacaan meelaha dabiiciga ah ee aan sidaa loo degganayn. Si ay danabku u garaacdo dusha sare, waa inay jiraan xaalado ku habboon.
Meelaha ugu jecel ee laga raadsado kaydka miinadani waa saxaraha, xeebta xeebta iyo xitaa buuraha. Qaaradda Mareykanka danab badan ayaa ku dhufta, sidaas darteed waxaa jira lacago xusid mudan oo fulgurite ah. Iyaga ayaa laga helay Xeebaha Maldonado, lamadegaanka Atacama, saxaraha Sonora iyo gobolada Utah, Arizona iyo Michigan. Mid ka mid ah ilaha ugu caansan ee fulgurite adduunka waa Saxaraha Saxaraha, oo ku yaal qaaradda Afrika.
Sidaad filan karto, bini aadamku qaababkan ayuu u adeegsadaa. Codsiyada si cad ayey muhiim ugu yihiin dhammaan sayniska. Iyo, ku mahadsanid tababarkan, waxaa suurtagal ah in dib loo dhiso habdhaqanka cimilada hore ee gobollada qaarkood. Isticmaalka macdantaan, waxaa macquul ah in lagu barto xaaladaha deegaanka ee ka jira gobol cayiman kumanaan sano ka hor. Qaybtani waxay noqoneysaa lama huraan haddii aan rabno inaan fahamno isbeddelka cimilada.
Dabcan, waxay ahayd in laga filo in aadanuhu ku guuleystey inuu Fulgurite ka helo qaab macmal ah. Feejignaanteeda waxay noqon kartaa mid khatar ah, maadaama ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo qaanso koronto oo leh danab sare. Haddii aan si sax ah loo samayn waxay noqon kartaa mid khatar badan. Waxaan ka hadlaynaa la shaqaynta danab. Tani waa sababta fulgurite ay ugu egtahay inay yeelato qiimo ka sarreysa si dabiici ah oo dabiici ahaan ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto fulgurite iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Fulgurite